Ukuphupha ngeAlps Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
IiAlps ziindawo ezithandwayo zokuchitha abantu abaninzi. Ayothusi into yokuba lo mmandla yenye yezona ndawo zibalulekileyo zeholide kunye nezokuhamba eYurophu. Ummandla wonke weAlpine ugubungela ummandla ojikeleze iikhilomitha ezingama-200,000 kunye neeAlps zezona ntaba ziphakamileyo eYurophu. Uluhlu lweentaba luchaphazela amazwe eFrance, Monaco, Italy, Switzerland, Germany, Liechtenstein, Austria naseSlovenia. Abahambi ngeenyawo kunye nezithuthi banokuhamba kwiiAlps ngokudlula kwiintaba.
Eyona ntaba iphakamileyo kwiiAlps yiMont Blanc, emi kumda ophakathi kweFrance ne-Itali.
1 Uphawu lwephupha «iAlps» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iAlps» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Alps» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iAlps» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba ubona iiAlps mgama ephupheni lakho, unako, ngokokuhlalutya kwephupha ngokubanzi, uyazi ukuba iphupha lakho lizalisekisiwe. Iidayes y Ithemba en el mundo yomlindo. Nangona kunjalo, le meko injengephupha ikwanokubonisa uhambo olusondeleyo, impilo entle kunye nobomi obude.
Kodwa ukuba umntu olalayo ulungile ezinyaweni zeAlps okanye uyayibona phambi kwakhe, kufuneka alungiselele ubunzima kunye neengxoxo zobomi bokwenyani. Awuyi kuba nakho ukubaphepha, kodwa kuya kufuneka wenze konke okusemandleni akho ukuze uzazi kakuhle iingxaki.
Ukuba umntu ophuphayo uzibona ephupheni lakhe kwiiAlps, iimeko zakhe zoqoqosho ziya kudityaniswa ekuvuseni ubomi kwaye angalindela inkqubela phambili entle kwindawo yeshishini. Ukuba iiAlps zigutyungelwe likhephu ephupheni, umntu oleleyo ufumana isilumkiso sokuba ukuzama kwakhe akuyi kuzisa nkqubela phambili okanye mpumelelo.
Ukuba umntu uthatha uhambo lwe-alpine ephupheni, linda iphupha uphuhliso olonwabisayo kwinqanaba lobungcali. Ukubona kweentyatyambo ze-alpine njengophawu lwephupha kubonisa ukwanda kwesiphelo sokomoya. Umfanekiso ofana nephupha wokukhanya kwe-alpine uhlala ufuzisela ithemba lalowo uphuphayo ngamava kaThixo kwilizwe elivukayo.
Ukuba uhlangabezana nomngxunya wephupha kwiphupha lakho leAlpine, kuya kufuneka ulumke ujikeleze abantu abanomona nabaziziyatha. Nabani na ocula ephupheni kwiiAlps okanye abone umntu ecula angathanda ukubonisa uvuyo lwabo kwihlabathi elivukayo.
Uphawu lwephupha «iAlps» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, uphawu lwephupha "Alps" lunako Ukuzithemba kwaye uqulethe ubuntu. Umntu olalayo kufuneka azi ezi zinto ngokulala ukuze azisebenzise ngokufanelekileyo ebomini bokuvuka.
Kolu toliko, indlela oziphatha ngayo amaphupha akho kwiintaba zeAlpine ikwadlala indima ebalulekileyo. Kungenxa yokuba koku ungabona ukuba ujonge ngakumbi okanye ngokuzithemba okuncinci kwikamva. Ukuba ngesibindi ukhwela intaba kwiiAlps ephupheni lakho, uya kuyeka uloyiko lwakho kwaye uya kuba kwihlabathi elivukayo. Yandisa ukuzithemba kwakho unako.
Ukuba umntu oleleyo ujonge phantsi encotsheni ye-alpine ephupheni lakhe, unqwenela ukujongwa ngcono kobomi bakhe, ngokwentetho yengqondo yephupha. Ufuna enkulu Amagqabantshintshi malunga nemeko abakuyo ngoku kwaye ngale ndlela bayayiqonda imiqobo enokubakho okanye ubunzima. Kuba ngale ndlela unokuzilungiselela ngaphakathi kwaye ke ujongane neengxaki ngoxolo ngakumbi kwengqondo.
Uphawu lwephupha «Alps» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwephupha lokomoya kutolika uphawu lwephupha "iAlps" ukuba lithethe uluhlu lweentaba. Ke, lo mfanekiso waphupha uqondwa njengophawu lwendawo kunye nokudibana kwezulu nomhlaba. Kodwa inokubhekisa emntwini Ukunyuka yalatha kwindawo yokomoya.